Kaddib ka tagistiisa Real Madrid, afar naadi oo lala xiriirinayo saxiixa Sergio Ramos xagaagan – Gool FM
(Madrid) 17 Juun 2021. Kaddib markii ay kooxda Real Madrid xaqiijisay inay fasaxday difaaceedii Sergio Ramos, waxaa albaabka garoonka Bernabeu Stadium ku sugaya kooxo dhowr ah oo doonaya saxiixiisa.
Waxaa guud ahaan burbur ku dhammaaday wada-xaajoodkii heshiiska loogu kordhin lahaa kabtanka Los Blancos iyadoo taasi sababtay inuu xagaagan bilaash ugu biiro kooxdii uu doono marka uu qandaraaskiisa dhaco dhammaadka bishan.
Si kastaba ha ahaatee, kooxaha Manchester City iyo Manchester United ayaa lasoo sheegayaa inay diyaariyanayaan dalabaad kala duwan oo ay xiddigan ku hordhigi doonaan heshiisyo macquul ah si uu kooxahooda ugu biiro.
Sidoo kale, waxaa yabooh la ordaya kooxda Sevilla oo diyaar u ah inay xiddigeedii hore siiso qandaraas shan sano ah si uu waayihiisa kubadda cagta ugu soo gabo-gabeeyo halkii uu kasoo bilaabay oo ah kooxda reer Andulus.
Paris Saint-Germain ayaa sidoo kale lala xiriirinayaa saxiixa 35-sano jirkan sida wararka qaar ay sheegayaan.